Kedu Njedebe nke Oru Ahịa? | Martech Zone
Kedu Njedebe nke Oru Ahịa?
Mọnde, Jenụwarị 16, 2012 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 19, 2012 Douglas Karr
A na-ahazi usoro ịzụ ahịa ahịa iji chọta Ọzọ na-eduga ma ọ bụ na-ebuli ndị ahịa ugbu a. Otu okwu anyị na ndị ahịa na-ahụkarị bụ na ha na-arụ ọrụ na njedebe na-ezighi ezi nke olulu ahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweta obere ndị ọbịa otu ọnwa na weebụsaịtị ha karịa ka ha ga-achọ… mana ọ bụrụ na ha nwere ike ịgbanwe okpukpu abụọ karịa ka ndị ọbịa ahụ nwere, ha ga-enwe ọganiihu.
A na-ewu ọtụtụ teknụzụ anyị na-arụ ọrụ iji belata oge achọrọ iji tọghata ndị mmadụ ezubere iche ma ọ bụ mee ka ọnụego ntụgharị na mpaghara ọ bụla ebe olulu ahụ na-eri. Ọ na-eju m anya mgbe niile na anyị na-akpọ ya foneelu… ọ bụ n'ezie karịa colander nwere nnukwu olile anya na-eri eri ebe niile. Kama ịrụ ọrụ n'elu olulu ahụ na ịkwọ ụgbọala ndị ọzọ na-eduga n'ime olulu jupụtara na oghere, ebee ka ị ga-esi nweta teknụzụ n'okpuru olulu ahụ?
Ndị a bụ ụfọdụ teknụzụ… tinyere ụfọdụ ndị ahịa anyị na ndị nkwado na-enyere aka:
Webmasters Ngwaọrụ na-enye ozi dị oke mkpa iji nyere gị aka ịbawanye ọnụ-pịa site na ọnụego ọchụchọ. Na-amaworị ntị na ole ọchụchọ okporo ụzọ na-eweta na saịtị gị, mana ị maara ihe pịa site na ọnụego dị na ọkwa gị ugbu a? Enwere ike ịkwalite ya?
URL mkpụmkpụ dị ka Bit.ly nwere ike inye gị data ị chọrọ iji hụ etu usoro mgbasa ozi mmekọrịta gị siri dị irè. You maara na Facebook na-ehichapụ ndenye ndị mmadụ hụrụ na-eji nke ha Edgerank algorithm… ma ọ nwere ike ibute obere ma ọ bụ ọbụlagodi ọ dịghị onye nke mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-egosi n'ezie?
Automlọ ọrụ ndị na-ere ahịa akpaaka dị ka Right On Interactive na-emepe emepe teknụzụ na-ebelata okirikiri na-enye usoro na-enyere gị aka akara gị na-eduga otú i nwere ike ịgwa ha okwu n'ụzọ dị irè karịa ogbe na gbawara thatzọ ndị nwere ike ịchụpụ na-eduga ọpụpụ.
Marketinglọ ọrụ na-ere ahịa email dị ka Delivra na-enye ozi email na ọrụ SMS nke nwere ike ịbawanye ọnụego nzaghachi yana kụziere ndị ahịa ugbu a etu ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha si arụ - ikike ụlọ, njigide na nnweta ohere yana ndu.
Online Survey nyiwe dị ka SurveyMonkey (onye zụrụ onye ahịa anyị, Zoomerang) nwere ike inye gị ọgụgụ isi chọrọ iji meziwanye usoro ịzụ ahịa ọdịnaya gị. Site na imeziwanye ọdịnaya gị, ị nwere ike ịdabere na ịdabere na nnweta ma hụ na a na-arụ ọrụ ndị ahịa gị nke ọma.
Nkwado ngwanrọ ngwa dika Tinderbox na-enye gị ohere ịhazi ma melite usoro ị chọrọ. Site na nsuso nzaghachi gị na ịghọta otu ị ga - esi meziwanye atụmatụ gị, ị nwere ike ịmegharị mgbanwe na ngwa ngwa karịa effectively niile ka ị na-eji obere akụ n'ime.
Ka ị na-ele Fleelị gị, olee ebe atụmatụ gị dị na-eri eri? Kama ịnwa ịbawanyewanye ndị na-ege ntị, enwere ezigbo ohere ị gaghị enye ndị ahịa na atụmanya ị nwere aka. Ọ bara uru ile anya!
Tags: Ndiaguemail Marketingakụrụngwa ahịanri na mmekọrịtaụlọ nkwonkwo ahịankwanye ahịaigbe igbe
Nke a bụ eziokwu Douglas. Ihe mbu bu na enwere m obi uto iguta akwukwo gi. iji mee ka ọtụtụ ndị na-ege ntị nwee mmekọrịta, enwere ezi ohere ị na-agaghị enye ndị ahịa na atụmanya ị nwere. Otu ihe m mụtara tupu m bụrụ ezigbo onye ode akwụkwọ na ogologo oge tupu Inc Magazine tozuru oke ụlọ ọrụ m dịka otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa bụ na site na iji teknụzụ ndị a, mmadụ nwere ike ịnweta ọtụtụ ndị na-ege ntị maka weebụsaịtị ịre ahịa n'ịntanetị.
Daalụ nke ukwuu maka okwu ọma gị, @DanielMilstein: disqus! Ma chee echiche obere mkpọtụ ga-adị ma ọ bụrụ na anyị elekwasị anya n'ịgbanye ụzọ anyị nwere kama ịwụkwasị ọtụtụ spam ebe ahụ.